ဦးဝီရသူ၏ လှို့ဝှက်ချက်များ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
March 3, 2017 drkokogyi
(၁) ဦးဝီရသူသည်… ဦးသန်းရွှေနှင့်ဇာတိအတူတူ
အမည်ရင်း ၀င်ခိုင်ဦးဖြစ်ပြီး ၈၈ အရေးခင်းပြီးနောက်
၂၀၀၃ ခုနှစ်မေလတွင်ဖြစ် ကျောက်ဆည်မြို့
သူ့အား ထောင် ၂၅ နှစ်ချလိုက်သည်၊
နာခံခဲ့ရသော်လဲ ဦးဝီရသူတွင် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်
သူ့အားထောင်ချလိုက်သော “မဟန” အားလဲ
အစာကြေပုံမရပဲ အစဉ်အမြဲ အညှိုးထားလျှက်ရှိပါသည်
ထောင်အတွင်းနေထိုင်စဉ်မှာလဲ မဟန အကြောင်းအတွင်းကျကျ
ပုတ်ခတ်ရေးသားထားတဲ့ သမိုင်းတရားခံ အမည်နဲ့ ဆောင်းပါးကို
၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ (၁၃)တွင် မြစ်ကြီးနားထောင်မှ
မဂ္ဂင်ဆရာတော် ဦးအိန္ဒြက အပါအ၀င်
ဦးပဏ္ဍ၀ံသ ဦးဂမ္ဘီရ ဦးဣဿရိယ အစရှိသော
ထောင်မှလွတ်လွတ်ချင်း ၀ီရသူသဘောထား ကြေငြာချက်များဖြင့်
ထင်ရှားဆရာတော်ကြီးများကို စတင် ဝေဘန်လျှောက်ထား
ပထမဦးစွာ ၀ီရသူသဘောထား (၁-) ဖြင့်
အရှင် ဂမ္ဘီရ အားဝေဘန်ခဲသည်.၊
ထို့နောက် (၂-) ဖြင့်ရွှေည၀ါ ဆရာတော်အား
( အသေးစိတ်သိလိုပါက message တွင်ပေးပါမည်)
ထို့နောက် ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလအတွင်းတွင်
NLD ပါတီမှ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွယ်
Wira Thu ဟူသော FB Page ထောင်ပြီး..
၉၆၉ ဟူသော ဂဏန်းကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်၊
၂၀၁၂ ကုန်ခါနီး တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့…
တစ်ရက်အလို ) ကာလတွင်
လက်ပတောင်းတောင်သပိတ်စခန်းသို့ အစိုးရမှ ကမန်းကတန်း
အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ရာ သံဃာတော် ၉၉ ပါးသည်
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်သွားနိုင်သဖြင့်
ဦးဝီရသူသည် ထိုအဖြစ်အပျက်တွင် ဒဏ်ရာရသောသံဃာများကို
နိုင်ငံရေး သမားများ၏ ဖျားယောင်မှုတွင်မပါဝင်စေရေးအတွက်
၀ီရသူသဘောထား (၁၂-၇၄) ကို ၁၈-၁၂-၂၀၁၂ တွင် ကမန်းကတန်း
ထို့နောက် ၂၀၁၃ မတ်လမှစကာ..
ဦးဝီရသူ၏ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှ သတင်းဓာတ်ပုံများ
ဘာမှမဆိုင်သော NLD ပါတီကို “မွတ်ဒေါင်း” ဟု စတင်
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုများ ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်တွင်
၉၆၉ အဖွဲ့များအား အတိုက်အခံပါတီများ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုး
အဖြစ် ပုံသွင်းနိုင်ခဲ့သည်၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်စိတ်ဓာတ်များအား
ပြည်သူလူထုသို့ ရိုက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားမှုကျယ်ပြန့်လာသည်၊
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို စစ်ဗိုလ်အချို့အပါအ၀င် အစိုးရလော်ဘီများမှအစ
အကြီးအကျယ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၀ါဒဖြန့်ကာလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်၊
အများစုမှာ Online မီဒီယာများတွင် အစီအစဉ်ကျကျလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်၊
Facebook Account အချို့သည်လဲ ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုကို
ထိုအချိန်တွင် ဥက္ကံနှင့် လားရှိုးမြို့များတွင်
ထုံးစံအတိုင်း ဦးဝီရသူသည် လှုံ့ဆော်ခဲ့ပေသည်၊
လက်ရဲဇက်ရဲများ ၊ ဒေါသထွက်နေသောလူအုပ်ကြီးများကို
အကြီးအကျယ် လှုံ့ဆော်ခဲ့သော ဦးဝီရသူအား အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ
အကြောင်းမှာ ထိုကလအတွင်းက လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၏
သူရဦးရွှေမန်းက ၉၆၉ အစွန်းရောက်များအား လက်မခံကြောင်းစကားကို
ထိုပြောကြားချက်သည် ဦးဝီရသူနှင့် လုပ်စားမျိုးနှစ်များ၏အရှိုက်ကို
ထိုးသကဲ့သို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး…စစ်ဗိုလ်များ ၊ စစ်လော်ဘီများပါဝင်သော..
အုပ်စုများသည် သိသိသာသာ မျိုးနှစ်လေသံများပျောက်ကွယ်သွားပါသည်.
အကြောင်းမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးဘာသာသာသနာစောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
(မဘသ)အမည်ဖြင့်အရေခွံလဲ ၉၆၉ အဖွဲ့ ပုံစံမျိုး
သာသနာရေး အညှာများစွာကို ကိုင်တွယ်ထားနိုင်သော အာဏာရှင်အစိုးရမှ
၂၁-၇ ၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်သည်..
၈၄×၈၅ လမ်းကြား ၃၆ လမ်းပေါ်မှာ
ကျင်းပတဲ့ တရားပွဲမှာ ဦးဝီရသူ ဟောကြားနေစဉ်
ည ၉းဝဝ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်
ပေါက်ကွဲမှုမှာ လူ(၅) ဦးလောက် ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရခဲ့ပေမဲ့
ပိုပြီးထူးခြားတာကတော့ အခုထက်ထိ အဲဒီဖေါက်ခွဲသူတရားခံတွေကို
အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း၊ မည်သူဟုယူဆခြင်းနဲ့
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်လည်ခန့်တွင် မန္တလေးမြို့တွင်
လိမ္မာပါးနပ်လှသောမြို့ခံများမှ အချိန်မှီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်၊
လီဆည်တိုင်တန်းရာမှ ဦးဝီရသူ ဖေ့စ်ဘုတ်မှစတင်ကာပြန့်နှံ့သွားပြီး
ကုလားမြန်မာ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြရှာပါသည်၊
ထိုပြဿနာကိုအကျယ်ချဲ့ပြီး ဆူပွက်လာသဖြင့် မြို့သူမြို့သားအချင်းချင်း
ပြဿနာမအောင်မြင်သောအခါမူ သမ္မတမှ မန္တလေးမြို့သားများကို
ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး ဟာဂျီထွန်းထွန်းမှာလဲ ဦးဝီရသူထံ
ကုလားညီအစ်ကိုကို အကောက်ကြံရာတွင်..အဘယ့်ကြောင့် တခြားနည်းဖြင့်
အကောက်မကြံပဲ ..မုဒိန်းမှုဖြင့် အမှုဆင်အကောက်ကြံသနည်း..
ပိုထူးခြားသည်က ဟာဂျီထွန်းထွန်း၏ရန်ဘက်ဖြစ်သူ ကုလားညီအစ်ကိုကို
ဦးဝီရသူ ဖေ့စ်ဘုတ်နှင့် နေမျိုးဝေဖေ့ဘုတ်များမှ..
မြန်မာလူမျိုးများသည် ငွေယူပြီး ကုလားမှမုဒိန်းကျင့်ခံရလေဟန်
ဦးဝီရသူသည် အဘယ့်ကြောင့် မတွေးတောသနည်း
အစိုးရနဲ့ အာဏာရှင်ကိုအားကိုးကာ လုပ်ကိုင်နေသည်မှာ
အစိုးရက သူ့ကို ဘာမှလုပ်မည်မဟုတ်ဟူသော
– သူနေထိုင်ရာမန္တလေးမြို့တွင် ပြည်ကြီးတရုတ်များလွမ်းမိုးလာသည်ကို
– ဘင်္ဂံလီ ၆ သိန်းကျော်အား အာဏာရှင်မှ ၀ှိုက်ကဒ်ပေးထားသည်ကို
– ဘာသာခြားတရုတ်ကုလား လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအား အစိုးရမှ
အညွန့်ခူးကျွေးကာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည်ကို မဝေဘန်ရဲပေ၊
– လက်ရှိအစိုးရ၏ သံဃာတော်များနှင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းများအပေါ်
ထိုကဲ့သို့ ထင်ရာလုပ်နေသော အစွန်းရောက်ဘုန်းကြီးများလုပ်မှ
သူတို့၏ ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက်ကောင်းမည်ဟု ယူဆထားသည့်အလား
မှတ်ယူကာ ဦးဝီရသူကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို
ထို့ကြောင့် သာမန်ပြည်သူတို့ သဘောပေါက်နိုင်သော
ဦးဝီရသူ၏ ထင်ရှားသည့် လှို့ဝှက်မှုများကို..
Credit: Pa Yit
— with Ko Ko Gyi.
tagTag PhotopinSuggest Location
102You, Moe Zaw Thu, Royal Sha Meem and 99 others
Moe Zaw အားလုံးရဲအပေါ်မှငါရှိတယ်
Moe Lay ခွေးရူးကောင်းစားတမွန်းတက်ပါ
Koko Chit မင်းကင့ါရှိတယ်လုပ်နေတာကိုတောင်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတာ
U Lay Zaw ဒီခွေးသားရ့ဲသမိုင်းက သမိုင်းယုတ်
← ဦးဝိမလဗုဒ္ဓိ သို့ချေပခြင်း
လက်ရှိအခြေအနေဟာ ဖက်ဆစ်က ရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေးပေးပြီး ဒေါက်တာဘမော်အဓိပတိတင်၊ ရုပ်ပြအစိုးရ ဖွဲ့ပေးထားတာနဲ့ တထပ်ထဲ တူနေတာပါပဲ →
One thought on “ဦးဝီရသူ၏ လှို့ဝှက်ချက်များ”
· ‘​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​ပြော​ပြော​နေတဲ့ တရားဥပ​ဒေစိုးမိုး​ရေး ဘာလဲ ဘယ်​လဲ’
ဒီရက်​ထဲ မဘသ​ ဘုန်းကြီး​တွေရဲ့ အမုန်းစကားဖြန့်​ဖြူးမှု​တွေက မူဆလင်​ဆန့်​ကျင်​​ရေးထက်​ပိုပြီး နိုင်​ငံ​ရေးလုပ်​ကြံမှု​တွေဘက်​ပါ ​ဇောင်း​ပေးလာတယ်​။ လူသတ်​ခြင်းကို ​ထောက်​ခံ​နေတယ်​။ အား​ပေး​နေတယ်​။
ဒီအရင်​မှာလည်း မျိုးချစ်​ရဟန်း​တော်​များသမဂ္ဂဆိုတာက ဦး​ဆောင်​ပြီး​တော့ မူဆလင်​​တွေရဲ့ ဘာသာ​ရေးအခမ်းအနားဖြစ်​တဲ့ တမန်​​တော်​​နေ့အခမ်းအနား(ခွင့်​ပြုမိန့်​တင်​ပြီး တရားဝင်​ ကျင်းပတာ)ကို လိုက်​ဖျက်​တယ်​။ အာဏာပိုင်​​တွေက ဘယ်​သူ့ကိုမှ မထိခိုက်​တဲ့ မူဆလင်​​တွေရဲ့ လွတ်​လပ်​စွာ ကိုးကွယ်​ယုံကြည်​ခွင့်​ကို အကာအကွယ်​ မ​ပေးဘူး။
ဒီချုပ်​ အနိုင်​ရပြီး အစိုးရဖြစ်​ကတည်းက မဘသလို အမုန်းတရားဖြန့်​ဖြူး​နေတဲ့အုပ်​စု​တွေအ​နေနဲ့ လွတ်​လပ်​စွာ​ပြောဆိုခွင့်​ ပိုရသွားသလိုပဲ။
ဒီချုပ်​အစိုးရ အ​နေနဲ့လည်း ​တိုင်းရင်းသား​တွေ၊ ကျောင်းသား​တွေ၊ အလုပ်​သမား​တွေ၊ လယ်​သမား​တွေနဲ့သာ မာမာထန်​ထန်​ ရှိတာ မဘသနဲ့​တွေ့ရင်​ကျ ​ပျော့​ပြောင်း​နေတယ်​။
မဘသဟာ မူဆလင်​ ဆန့်​ကျင်​​ရေး အပြင်​ စစ်​တပ်​နဲ့ ဆန့်​ကျင်​ဘက်​ဖြစ်​​နေတဲ့ အင်​အားစုမှန်​သမျှကို သတင်းမှား​တွေနဲ့ပါ ထိုးနှက်​တိုက်​ခိုက်​ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်​တယ်​။ ဥပမာ ကျ​နော်​တို့ လမ်း​လျှောက်​တုန်းက OIC နဲ့ တခြားဆီက​နေ သိန်းကိုး​ထောင်​ရတယ်​ဆိုတာ မဘသနဲ့ တပ်​​လော်​ဘီအ​ကောင့်​​တွေက စဖွတဲ့ သတင်းမှားပဲ။ အဲဒီ အလုံး​တွေက ​နောက်​မှ ဒီမို​လော်​ဘီဆိုတဲ့ နလပိန်းတုန်း​တွေ ပါးစပ်​ထဲ​ရောက်​သွားပြီး မဘသနဲ့ စစ်​တပ်​အလုံးကို အနည်းငယ်​​ပြောင်းငုံပြီး ကျ​နော်​တို့ကို စွပ်​စွဲတိုက်​ခိုက်​​တော့တာပဲ။ (အခု ကာလတခု​ရောက်​ပြီ ကျ​နော်​တို့ ဘယ်​လို ရုန်းကန်​ရှင်​သန်​​နေလဲ​တော့ ​ပေါ်​လွင်​နေပြီ​ပေါ့​လေ)
မဘသအ​ကောင့်​​တွေက ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ အာဏာရပြီးကတည်းက ကာလတခုကြာအထိ ငြိမ်​ပြီး မူဆလင်​ ဆန့်​ကျင်​​ရေးပဲလုပ်​တယ်​ ဒီချုပ်​ဆန့်​ကျင်​​ရေးမလုပ်​ဘူး။ အခုကျမှ ဒီချုပ်​ဆန့်​ကျင်​​ရေးစကားသံပါ ကျယ်​ကျယ်​​လောင်​​လောင်​ ထွက်​​ပြောလာတာပဲ။ သူတို့က ဘာကိုတည်​​နေသလဲဆိုရင်​ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်​ရဲပြင်​ကြည့်​လို့ တိုက်​ရိုက်​ ခြိမ်း​ခြောက်​တယ်​။ ဒါ ကြားဖြတ်​နီးတာထက်​ ​နောက်​ကကိုင်​တဲ့ လက်​​တွေရဲ့ အကွက်​အတိုင်း ​ရွှေ့တာ ပိုဖြစ်​နိုင်​​ခြေရှိတယ်​။
မဘသဟာ ဒီချုပ်​အတွက်​ ဗြဟ္မာကြီးဦး​ခေါင်းထက်​ပိုတယ်​။ ကိုင်​ထားလည်း ဟိုက အကိုင်​မခံ။ လွှတ်​ချလည်း မီးဟုန်းဟုန်း​တောက်​မှာ။ အ​ကောင်းဆုံးက​တော့ လူသတ်​ဝါဒ ဖြန့်​ဖြူးတဲ့ တဦးချင်းကို အ​ရေးယူတာပါပဲ။ မဘသကို တည်​ရှိခွင့်​​တော့ ​ပေးရမယ်​။ အမုန်းစကားဖြန့်​ဖြူးခွင့်​​တော့ မ​ပေးရဘူး။
ဒီချုပ်​အ​နေနဲ့သိထားရမှာက မီး​မ​တောက်​ခင်​ ညှိမ်းဖို့ပဲ။ လူ​တွေက ​အရာရာ မ​ပြေလည်​လို့ ​ဒေါသထွက်​​နေကြတယ်​။ အဲဒီ​ဒေါသ​တွေက ဘာသာ​ရေးအဓိကရုဏ်းဘက်​ကို လှည့်​သွားဖို့ သိပ်​လွယ်​​နေတယ်​။ အမုန်းတရားဖြန့်​ဖြူးမှု​တွေကို ဟန့်​တားဖို့က အစိုးရ အလုပ်​ပဲ။ အဲဒီ အလုပ်​​တွေကို ပြည်​သူ​တွေက ဝင်​လုပ်​လည်း အစိုးရကို မမှီနိုင်​ဘူး။
သတိထားရမှာ​တော့ မဘသကိစ္စဟာ အကဲဆတ်​တယ်​။ မထသလို သွားကိုင်​တွယ်​ရင်​ ​ခေါင်းကို ဆင်​နင်းလိမ့်​မယ်​။ တရားဥပ​ဒေကို သတင်းစာထဲ ကွက်​ မစိုးမိုးဖို့​တော့ လို​နေပါပြီ။